तपाईंको ईन्टरनेट व्यवसायमा ट्राफिक लक्षित गर्न अग्रणी सुझावहरू ... | यातायात सम्बद्ध गर्न
लक्ष्यीकरणमा अग्रणी सुझावहरू यातायात तपाइँको इन्टर्नेट व्यवसाय मा
तपाइँको वस्तुहरू वा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको विज्ञापन बिना, तपाइँको संगठन निश्चित रूपमा पहिचानको रूपमा मान्यता बिना नै मान्यता दिइने छ, बिभिन्न अन्य शब्दहरूमा, ग्राहकहरू तपाइँको व्यवसाय मरे!
व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्याले एफिलियट मार्केटि ofको र्याs्कमा साइन अप गर्दै छ जुन भनेको व्यक्तिको वस्तुहरू विज्ञापन गर्दछ, या त तपाईको आफ्नै वा अरू कोही बिक्री वा क्षतिपूर्ति दिने आशामा!
यस प्रकारको व्यवसायको लागि तपाईले प्रोमोट गर्न आवश्यक छ, समान एफिलियट मार्केटरको साथसाथै ती सबैका लागि उत्तम क्षेत्र ट्राफिक एक्सचेन्जहरू, सेफ लिस्टहरू, भाइरल मेलरहरू, र अन्य।
बहुसंख्यक एफिलियट मार्केटरहरूले बक्स बाहिर विश्वास गर्न कोसिस गर्छन् र केहीले वास्तवमै उनीहरूको खोजी जारी गरेका छन् र एक अर्कासँग विज्ञापन कार्यक्रमको विशाल सूचीकरण राखेका छन्। त्यस्तै एक लिस्टिंग हो।
बसोबास गर्नुहोस् संरचना निःशुल्क लक्षित ट्राफिक
के हामीले त्यो स indicate्केत गर्छौं ती व्यक्तिहरू हुन् जससँग पसलहरू, क्याम्पि websites वेबसाइटहरू ज्वेलरको प्रकारको कम्पनी छ।
बनाउन एक वेबसाइट त्यो प्रयोगकर्ता मैत्री पनि छ र सजिलो छ।
ठीक छ, त्यसोभए तपाईले आफ्नो साइट आगन्तुकहरूलाई ग्राफिक्सको साथ साथै इन्टरनेट साइटमा कम्प्युटर एनिमेसनहरूको संग्रहको लागि लोभ्याउन चाहानुहुन्छ। केवल यसले टोनमा समय लिने छैन तर मकड़ीहरूले निश्चित रूपमा यसलाई वेबसाइटको साथ ब्राउज गर्न चुनौतीपूर्ण भेट्टाउनेछन्। यदि तपाईं ती मध्ये एकसँग साईन अप गर्नुभयो र तपाईंको विज्ञापन प्रोजेक्टको साथ सुरू गर्नुभयो भने, तपाईं निश्चित रूपमा अझ बढी सम्भावित उपभोक्ताहरू भित्र ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ।
लाई लक्ष्य इन्टरनेट साइट वेब ट्राफिक तपाईंको लागि प्रारम्भिक लाग्नका लागि थोरै मेहनती हुन सक्छ। यदि तपाइँ के गर्ने र कहाँ सुरु गर्ने भनेर चिन्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा कुनै समस्या हुँदैन। यी अधिक सुझावहरू दिमागमा राख्नुहोस् अधिक प्रभावकारी ईन्टरनेट संगठनको लागि!
तपाइँको वस्तुहरू वा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको विज्ञापन बिना, तपाइँको संगठन निश्चित रूपमा चिन्न सकिने छैन र मान्यता बिना पनि, बिभिन्न अन्य शब्दहरुमा, आगन्तुकहरु तपाइँको व्यापार मरे! धेरै एफिलियट मार्केटरहरूले अतिरिक्तको रूपमा बाकसको बाहिरबाट लिन खोज्छन् र केहीले वास्तवमै उनीहरूको खोजीको लागि रिलीज गरेका छन् र एक अर्कासँग विज्ञापन कार्यक्रमहरूको विशाल सूचीकरण राखिएको छ। ठीक छ, त्यसोभए तपाई आफ्नो साइट आगन्तुकहरु लाई ग्राफिक्सको साथ आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ र इन्टरनेट साइटमा कम्प्युटर एनिमेसनको संग्रह पनि। यदि तपाईं ती मध्ये एकमा साईन अप गर्नुभयो र तपाईंको विज्ञापन प्रोजेक्टको साथ शुरू गर्नुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि अझ बढी उपभोक्ताहरूमा आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
वेब साइट ट्राफिक लक्षित गर्न को लागी तपाईलाई पहिलो नजर मा थोरै मेहनती हुन सक्छ।